> Lacagta iyo dhaqaalaha > Koontada bankiyada ama poostada
Si hawlaha iyo nolosha Swiisku kuugu fududaato in aad yeelato koonto ama keyddhig bankiga ama poostada waa lagama maarmaan. Badanaaba mushaharka waxa dadka loogu soo shubaa koontada bankiga aa poostada. Koontadaada ayaa kuu suurtagelineysa in aad lacag ka soo baxsatid bangiga ama poostada. Waxa kale oo aad ku bixin kartaa lacagaha lagugu leeyahay, sida ijaarka guriga, korontada, taktarka, waa na ku gadankartaa wixi aad doonto. Waraaqda koontada ayaa kuu suurtagelinaya inaad markaad doonto lacag kala soo baxdo akiinadaha bangiga.
Sida koonto loo furto
Waxad fursan u haysataa in aad koonto ka furato faracyada bankiyada eel kasta ay ku yaalaan ama xafiisyada poostad. Waxad toos u tegeysaa bankiga ama xafiiska poostada adiguu wadata waraaqdda aqoonsiga, waxa na lagaaga baahanyahay in aad ka jawaabtid dhow suaalood oo ku saabsan xaaladaada dhaqaale.
Marka aad dooneyso in aad koonto furatid, waxa agaa codsanayaa in la tiaadid Bssaboorkaaga, Warqadda aqoonsiga, waraaqaha aad wadanka ku joogto sida C ama B IWM.
Warqadda bankiga ( kaarka)
Marka aad koonto furato waxa lagu siinayaa warqadda bankiga ama poostada, taas oo awood kuu siineysa in aad lacag kala soo baxdid bankigaama poostada korsaar la’aan. Waxa badaaa lacagta lagala soo baaa makiinadda bankiga ama poostada oo loo yaqaan Bankoomaat. Waxa loo baahanyahay in aan barato sida loo isticaalo.
Waxad awoodi kartaa in aad codsato warqadda bangiga ee korsaarka yar oo loo yaqaan warqadda Maestro ama warqadda PostFinance oo leh nambar sir ah oo adiga mooyee aan qof kala aqoon. Waa warqaddaas tan kuu ogolaaneysa in lacag kala baxdid bangi kasta am Bancomaatyada.
Waxa la ogeysiiayaa dadka koontada furanaya in warqadda bangiga(karaka) loo yaqaan PostFinance ay ka dulsaar jabn quwa bankiyada. Isku daya in aad isbarbardhigtaan labada nooc adinka oo eegaya dantiina khaaska ah.
Sida internetka lacag loogu diro
Bankiyada iyo poostadu ba waxay macaamiishooda siiyaan nambar keyd oo u ogolaanaya qofka in uu koontadiisa toos wax ugu shubikaro. Waxa qofku habeen iyo maalin ba u furan in uu koontadiisa wax ku subo waxa na kala baxo. Waxa kale oo qofku awoodi karaa in uu lacagaha lagu leeyahay ku bixiyo dowga internetka sida ijaarka guriga, waa kale uu awoodikaraa in uu ogaado tirade lacagta koontadiisa ugu jirta.
Faa’idada ku jirtaHaddii aad isticmaasho internetka si aad lacaga ugu dirto bangiga ama poostada waxad faaideysaa lacag
Koontooyin khaas ah
Waxa jira koontooyin ku xiran shuruudo gaar ah. Caruurta, dhalinyarada, dadka deda yar iyo kuwa hawlgabay ba waxay faaidayaan dulsaar dheeraad ah oo ay ka helaan sanadki laagta bangiyada u taal, kaas oo ka badan inta loogu kordhiyo dadka waaweyn oo lacagaha dhigta bangiga.
Is garabdhiga laagaha dulsaarka ee ay koontooyinka bangiyada iyo kuwa poostooyinki idiinku deeqayaan oo la xiriira hadba lacagaha bangiga idiin yaal oo koontadiina ku jira.
Is garabdhiga inta l idiin dulsaarayo
Side koonto looga furtaa bangiyada